Igumbi elikhulu loSapho eLaranjaLimao GuestHouse
Zilungiselele ukonwabela indalo kunye nokuba sempilweni.
Ndizohlala ndikhona...Ngamanye amaxesha kungathatha imizuzu emi-5 kuba ndinokuba ndikwikomkhulu (eli-2km kude) lenkampani yam i-Weproductise. Umsebenzi wethu udibanisa i-eco-design kunye ne-digital fabrication technologies (ukusika i-laser, i-CNC yokugaya kunye noshicilelo lwe-3D). Sineempawu ezi-2, enye yokukhanyisa izihombisi, www.bomerango.co kunye neyentlalontle kunye nemisebenzi yomzimba, www.bodymover.pt.
Ndizohlala ndikhona...Ngamanye amaxesha kungathatha imizuzu emi-5 kuba ndinokuba ndikwikomkhulu (eli-2km kude) lenkampani yam i-Weproductise. Umsebenzi wethu udibanisa i-eco-design…